B2B Yekutengesa Yekutungamira kuDhivha Yekutengesa Zviwanikwa | Martech Zone
Iyi infographic kubva Introhive inoita basa rakanaka mukuputsa matekiniki kune zviteshi zvebhizinesi kune bhizinesi (B2B) kushambadzira kwekushambadzira kunoitisa mhedzisiro yekutengesa. Ini handina chokwadi chekuti rairo pano inofanirwa kugamuchirwa chaiko nesangano rega rega reB2B, asi inopa tsananguro huru yekuti magero anogona kubatsira sei kutengesa kwako.
Ichi chishandiso chakaitirwa kuti ikubatsire kuti unzwisise kushambadzira kweB2B uye nzvimbo yekutengesa kuitira kuti ugone kuona nzira dzakakodzera uye matekiniki esangano rako. Mushure mekuongorora kwakanyatso uye makore ehuzivo mukushambadzira kweB2B, isu takatarisa kushanda kwezvose kubva kuTwitter kusvika kunotonhora mafoni.
Introhive inzvimbo yekutengesa inoshamwaridza iyo mepu kubatana pakati pekambani nevatengi vavo uye tarisiro.
Tags: b2bintrohiveSocial Media Marketingkutengesa munharaunda